News - Covid-19 wuxuu keenay saameyn weyn oo tijaabo u ah Warshadaha Caalamiga ah ee Tafaariiqda
Qeybtii ugu horeysay ee 2020, si lama filaan ah ayuu u qarxay coVID-19 wuxuu saarey warshadaha tafaariiqda adduunka, oo ay ku jiraan warshadaha dharka, saameyn weyn iyo tijaabin. Marka loo eego hoggaanka adag ee Golaha Dhexe ee CPC, xaaladda ka hortagga cudurrada iyo xakameynta cudurrada ee Shiinaha ayaa sii waday inay soo hagaagto, wax soo saarka iyo nidaamka nolosha ayaa lagu soo celiyay xawaare dhakhso leh, suuqa macaamiisha ayaa sii waday inuu si isdaba joog ah u soo kabto, macaamiishana si tartiib tartiib ah ayey u soo kabanayaan. kordhiyay rabitaankooda iyo kalsoonida ay ku qabaan kharashka. Laga soo bilaabo Jannaayo illaa Juun ee sannadka 2020, iibka tafaariiqda ee Shiinaha ee alaabada macaamiisha ayaa dhammaa 17.23 trillion yuan, hoos udhaca 11.4% sanadkii sanadkii iyo 7.6 boqolkiiba dhibco kayar tan rubucii koowaad. Iyaga dhexdooda, iibinta badeecadaha ayaa si joogto ah loo soo qabtay. Bishii Juun, iibinta tafaariiqda ayaa asal ahaan ka soo kabtay 3 tiriliyan yuan isla muddadaas sanadkii la soo dhaafay. Dib u soo kabashada ayaa la dedejiyay, suuqa macaamiisha ayaa si joogto ah kor ugu kacay, macaamiishana waxay noqdeen kuwo aad u jecel oo kalsooni ku qaba inay wax kharash gareeyaan. Laga soo bilaabo Jannaayo illaa Juun ee sannadka 2020, iibka tafaariiqda ee Shiinaha ee alaabada macaamiisha ayaa dhammaa 17.23 trillion yuan, hoos udhaca 11.4% sanadkii sanadkii iyo 7.6 boqolkiiba dhibco kayar tan rubucii koowaad. Iyaga dhexdooda, iibinta badeecadaha ayaa si joogto ah loo soo qabtay. Bishii Juun, iibinta tafaariiqda ayaa asal ahaan ka soo kabtay 3 tiriliyan yuan isla muddadaas sanadkii la soo dhaafay.
Marka la eego xaalada cakiran ee haatan jirta, dharka wali lagama maarmaan u yahay nolol maalmeedka. Waxaan marwalba ku adkeysanay inaanu soo saarno dharka isboortiga ee caadiga ah. Si ka duwan dharka dadka waaweyn, macaamiisha waxay tixgelin doonaan arrimo ay ka mid yihiin raaxada, tayada, sumadda, iyo buuxinta markay soo iibsanayso dharka carruurta, oo aan ahayn “muuqaal-qurxoon” oo keliya. Tani waa sababta oo ah carruurtu waxay ku jiraan marxaladda koritaanka waxayna leeyihiin shuruudo sare oo loogu talagalay dharka dhow, taas oo ay tahay inay hubiso raaxada iyadoon waxyeello u geysan caafimaadka.
Shirkadeenu waa shirkad ganacsi oo ajnabi ah oo leh dhar caadi ah iyo dharka caruurta oo ah waxyaabaha ugu horeeya, dharka aan biyaha lahayn iyo kuwa neefsanaya, shaqooyinka fiican, qaabka moodada ah. doorashada iyo kalsoonida isboortiga bannaanka